एक्सपर्ट प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट सुरु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एक्सपर्ट प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट सुरु
डिसी नेपाल , १० जेठ २०७६
काठमाडौं । एक्सपर्ट प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँको कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा प्रतियोगिताको उद्घाटन युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले गरे। प्रतियोगितामा प्रदेश स्तरीय ७ टीम र ३ विभागीय गरि १० टिमको सहभागीता रहेको छ।
आज भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजयी शुरुआत गरेको छ। जीत निकालेको आर्मीले प्रदेश नम्बर २ लाई १७१ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो।
आर्मीले दिएको २७० रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश नम्बर दुई ३१.४ ओभरमा जम्मा १०७ रनमा समेटिएको थियो। आर्मीलाई जिताउन शहाव आलमले ४ तथा र शुसन भारीले ३ विकेट लिएका थिए। यसैगरी जितेन्द्र मुखियाले २ तथा कुशल मल्लले एक विकेट लिएपछि प्रदेश २ को पारि समेटिएको थियो।
प्रदेश २ का लागि हरि शंकर साहले सर्वा्धिक २१ रन बनाउँदा समसद शेख १६ तथा सुधिर चौधरी १५ रनमा आउट भए। टस हारेर पहिला व्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २७८ रन बनाएको थियो। आर्मीका लागि राजु रिजालले सर्वाधिक ९० रन बनाए।
ओपनिङ आएका राजु र कप्तान बिनोद भण्डारीले १२१ रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई बलियो शुरुआत दिलाएका थिए। राजुले ९० रन बनाउँदा ५ चौका र २ छक्का प्रहार गरे। यसैगरी भण्डारीले ९ चौकाको मद्दतले ६६ रन बनाए।
रोहित कुमार पौडेलले ४७ रन बनाउँदा हरिबहादुर चौहानले २६ रनको योगदान गरेका थिए। सुशन भारी १२ रनमा नट आउट हुँदा करन केसी ११ रनमा पेभेलियन फर्किए। प्रदेश २ का हरिशंकर साहले तीन विकेट लिए।
१० ओभरको स्पेल पुरा गरेका साहले १ ओभर मेडन राख्दै ५५ रन खर्चिएका थिए। रसिद खान, विवेक यादव, समसद शेख र विशाल सुस्लिङले एक एक विकेट लिए।